Saayinsiifi teknolojii: meeshaa furtuu mirkaneessaa misoomaa waaraa
Saayinsiifi teknolojii: meeshaa furtuu mirkaneessaa misoomaa waaraa Featured
Muummichi ministeeraa badhaafamtootaaf wayita badhaasa kennanitti
“Taphni ani taphadhullee, bakki ani ooluufi dhiibbaan naannawaa, kalaqa kootiif galtee naaf ta'eera. Wanta badhaasaa kanaaf na geessisee yoon duubaa deebi'ee ilaalu daa'imummaatti bu'aan teknolojii naannawaa keenyatti argee fakkeessee hojjedhu badhaasa kanaa akkan mo'adhu taasiseeraa” kan jedhan Barsiisaa Asaamminoo Tasfaayeeti.
Isaanis Naannoo Oromiyaarraa Sirna badhaasa saayinsii, teknolojiifi kalaqaa biyyoolessaa 8ffaa Sanbata darbee galmaa Komishinii Dinagdee Afrikaatti gaggeeffamerratti rissiivarii raadiyoo kalaquun badhaafamaa meedaaliyaa nahaasaa ta'aniiru. Kun kan isaan dorgomnmii ittiin injifatan malee, kalaqoonni hedduun harkasaanii akka jiran eeru. “Saayinsiifi teknoloojiin lafee dugdaa jijjiirama biyya kanaati” kan jedhan barsiisaan kun, dagaaginafi guddina fuulduree biyyattiif ijoo ta'uu himaniiru. Badhaasichis karoorasaanii fuulduraf riqicha ta'uu ibsuun, kalaqasaaniin sadarkaa biyyoolessatti dorgomaa ta'uuf abdii akka qaban himu.
Barataa kutaa 12fafi badhaafamaan meedaaliyaa Warqee dargaggoo Asraat Indaalee akkasuma Naannoo Oromiyaarraa kalaqawwan garagaraa hojjechuudhaan badhaafamaa ta'eera. Akka inni jedhutti, meeshaa anniisaa aduutiin ashaaraa namootaa adda baasuu danda'uufi kan biroo kalaqeera. Miidiyaalee garagaraarraa odeeffannoo argatuun, xiyyeeffannaa mootummaafi deeggarsaa barsiisota isaatiin kalaqaa kanaaf kaka'uu eera.
“Saayinsiifi teknolojiin anaaf jijjiirama” kan jedhu barataan kun, guddina biyyattiif bu'uura akka ta'eefi daandii ittiin hiyyummaarraa gara badhaadhummaatti ittiin ce'an ta'uu hima. Guddina dinagdeerrattis ta'e qaroomina hawaasaarratti dhiibbaa olaanaa kan uumu ta'uu eeruun, barattoota fedhii saayinsiifi teknolojii qabaaniif caalaatti xiyyeeffannaan kennamuu akka qabuu ibsa.
Saayinsii, teknoloojiifi kalaqni guddinaa biyyaa saffisaadhaaf meeshaa gargaartuu qofaa utuu hintaanee, mirkaneessaa misoomaa waaraatiif meeshaa furtuu ta'uun wal hingaafachiisu kan jedhan Walitti Qabaa Mana Maree Saayinsiifi Teknolojiifi Miniistira Muummee Haayilamaariyaama Dassaalanyi. Isaanis sirna badhaasa saayinsiifi teknolojii 8ffaarratti akka jedhanitti, iccitiin milkaa'inaa biyyootaa guddinaan sadarkaa olaanaarra jiranii, saayinsii, teknolojiifi kalaqa, akka imaammata meeshaa furtuu rakkoo ijootti fudhachuusaaniiti. Yeroo ammaas ce'umsa dinagdee barbaadamu mirkaneessuuf mootummaan damechaaf xiyyeeffannaa kennuudhaan imaammataafi tarsiimoo saayinsii, teknolojiifi kalaqaa hojiirra oolcheeraa jedhaniiru.
Guddinni biyyaa kan mirkanaa'u, sochii jijjiiramaa waliigalaa taasifamuun ta'uu kan himan ministirri muummee, fuulduraa ta'anii hawaasaa milkaa'inaan kan ga'an gootota nu barbaachisaa jedhaniiru. Badhaasni kunis badhaafamtoonni harka maratanii akka ta'aniif utuu hintaanee qorannoowwan rakkoo furaniif xiyyeeffannaa kennuun akka tattaffatan dhaamaniiru. Lammiilee hojii gaarii hojjetaan caalaa akka tattaafatan gochuudhaaf, akkasumas kanneen biroon faanasaanii hordofuudhaan gumaachaa hiikaa qabu akka taasisan gochuuf badhaasi kun kan ittifufu ta'uu himaniiru.
Ministirri Ministeeraa Saayinsiifi Teknolojii Injiinara Dr Geetaachoo Makuriyaa gabaasa sochii ministeerichaa dhiyeessaniin, barattoota dandeettii addaa qaban leenjisuufi bartatootaa yeroo gabaabaa keessatti saayintistootaa ta'an horachuuf, Buraayyuutti Mana Barnootaa Dandeettii Addaa hundessuuf sochiirra jiraachuu himaniiru. Akkasuma barattoota yunivarsitii damee saayinsiifi teknolojiirratti qoratan bakka muuxannoo itti horataniifi ogummaa itti dhandhaman Kaaffee Saayinsiis kan hundeeffamu ta'uu ibsaniiru.
Sirna badhaasa kanarratti namoota 144fi anmoota shaniif badhaasni sadarkaa olaanaa kan kennamee yoo ta'u dhaabbata tokkoofi kanneen birootiif badhaasnii warqii, meetiifi nahaasaa kennameera.
Torban kana/This_Week 43226
Guyyaa mara/All_Days 1468006